यौन जिज्ञासा - बाख्रासंग यौन सम्पर्क गर्दा बाख्रा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन ?
​समस्या : नमस्कार म १७ बर्षिय युवक हुँँ । सेक्स अन्धो हुन्छ भन्छन सायद म पनि अन्धो भएछु क्यार ३ दिन भयो मैले बाख्रालाई यौन सम्बन्ध राखेको बाख्राको योनी भित्र मेरो यौन रस अर्थात शुक्रकीट भित्रै पस्यो । के अब बाख्राले गर्भ धारण गर्छ मान्छेको ? मलाई डर लागेको छ कृपया मेरो समस्या र जिज्ञासाको समधान पठाइदिनु होला ।
यो प्रश्न हामीलाई नवलपरासीको एक मित्रले इमेलमा सोध्नुभएको थियो ।
समधान : बाख्रा संग यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो होइन
किनभने, यो अप्राकृतिक यौन सम्पर्क हो । यस्तो यौन सम्पर्कले के कस्तो प्रभाव हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन ।यसरी यौन सम्पर्क गर्नु पशुको अधिकारको उलंघन हो र कानुन अनुसार दण्डनिय पनि हुन सक्छ । जनावरसंग यौन सम्पर्क गर्दा रोग लाग्न सक्छ । जसको उपचार सजिलो नहुन सक्छ । समाजले पनि यस्तो कार्यलाइ राम्रो मान्दैन । त्यसैले कसैले यो बारेमा थाहा पाएमा तपाइ समाजबाटनै बहिस्कृत पनि हुन सक्नुहुन्छ ।
अब, तपाइको प्रश्नको जवाफ - यसरी सम्पर्क गर्दा गर्भ भने रहँदैन । किनकि, मानिसको शुक्रकिटले बाख्रा वा अन्य जनावरको अण्ड सिंचित गर्न सक्दैन । त्यसैले, गर्भ रहने सम्भावना नभए पनि अन्य समस्या हुने हुनाले यस्तो यौन सम्पर्क यथाशिघ्र बन्द गर्नुहोला ।
के तपाईंसंग पनि यस्तै जिज्ञासा छ ? छ भने हाम्रो फेेसबुक पेज - https://facebook.com/miracleteen लाइक गर्नुहोस र प्रश्न सोध्नुहोस् । अथवा, miracleteenteam@gmail.com मा पनि इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
यौन जिज्ञासा - बाख्रासंग यौन सम्पर्क गर्दा बाख्रा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन ? 2017-05-11T23:30:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Nepali Sexual Health Sexual Curiosity Sexual Health खुुलदुली र जिज्ञासा नेपाली यौन स्वास्थ
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: यौन जिज्ञासा - बाख्रासंग यौन सम्पर्क गर्दा बाख्रा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन ?